Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး RayHaber | raillynews
[25 / 05 / 2020] Döviz ve Altın İşlemlerinde Vergi Oranı Binde 2’den Yüzde 1’e Çıkarıldı! 100 Doları Olan 1 Dolar Vergi Ödeyecek	အထွေထွေ
ယခုအချိန်တွင်ထံမှတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, တူရကီရဲ့ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပထမဆုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည် Bursa သည်သူ၏ပိုးသန့်ဆေးအလုပ်ကိုတစ်ဦးအသက် 15 downloads, တစ်ရက်, တစ်ပတ်, ဆိုက်မှာအားလုံးဘတ်စ်ကားနှင့်မြေအောက်ရထားကားများမှာလည်းBurulaş [ပို ... ]
စီးပွားဖြစ်အငှားယာဉ်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များနှင့် Corona ကာကွယ်ခြင်း
Manisa Metropolitan မြူနီစီပယ်စီးပွါးရေးအငှားယာဉ်များတွင် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုကိုမြို့လယ်ခေါင်ရှိကျောင်းသားများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားသယ်ယူပို့ဆောင်သော ၀ န်ဆောင်မှုယာဉ်များဖြင့်ပိုးမွှားကူးစက်သည်။ ပြုထားသောအလုပ်ကြောင့်စိတ်ကျေနပ်မှုပေးသော Manisa ယာဉ်မောင်းများနှင့်မော်တော်ကားများ [ပို ... ]
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသော Corona virus ပြီးနောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များသန့်ရှင်းရေးသည် ပို၍ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ Kocaeli Metropolitan Municipality ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံမှလည်ပတ်Akçarayလမ်းရထားလမ်း [ပို ... ]
ဗန်တွင်နေ့စဉ်သောင်းချီသောပြည်သူများကိုသယ်ဆောင်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များသည်ဖြစ်နိုင်သော corona virus၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထွန်းသစ်စနှင့်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြိမ်းခြောက်နေသည် [ပို ... ]
ဆမ်ဆန်တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူများအသုံးပြုသောရထားများသည်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုးမွှားကူးစက်သည်။ နေ့တိုင်းလူ ၁၀၀၀၀ ကျော်အသုံးပြုသော Samsun Metropolitan Municipality SAMULAŞ A.Ş. နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောရထားများနှင့်ဘတ်စ်ကားများကိုအထက်မှအောက်သို့စင်ကြယ်စေပါသည်။ [ပို ... ]